ओली निकट नेकपाका युवाले गरे शक्ति प्रर्दशन, काँग्रेसद्वारा १३ वटै तहमा विरोध सभा « News of Nepal
नेकपा ओली निकटका युवाहरुले काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल र पनौतीका विभिन्न स्थानमा मोटरसाईकल र्‍याली मार्फत शक्ति प्रर्दशन गरेको छ । जिल्ला संयोजक विक्रम चौलागाई र सह संयोजक राजकुमार श्रेष्ठ दुबै ओली समुहमा सक्रिय भए पछि जिल्लामा पहिलो पटक शक्ति प्रर्दशन गरेका हुन् । राजकुमार पुर्व माओवादी निकट वाईसिएलमा आवद्ध थिए भने चौलागाई एमाले निकट युवा संघका अध्यक्ष थिए । शक्ति प्रर्दशन पछि बृहत्त कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेताहरुले प्रशिक्षण मुलक मन्तब्य राखेका थिए ।
कार्यकर्ता भेलालाई नेकपा केन्द्रिय सदस्य एवं जिल्ला इन्चार्ज पुर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले युवाहरुलाई शशक्त रुपमा उभिन आब्हान गर्नु भयो । मुलुक र राष्ट्रको हितका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाकाबन्दीको सामना गरी एउटा देश निर्भर हुनु पर्ने अवस्थाबाट मुलुकलाई हटाई विकल्प सहितको सम्झौता गरेको स्मरण गराउनु भयो । मुलुक निर्माण, समृद्धी, आत्मसम्मान, प्रगतिको बाटोमा अगाडी बढाउन निर्वाचनको विकल्प नभएको बास्कोटाले बताउनु भयो । ‘प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री हतार भएको छ, त्यसको आधार के हो ? चुनावबाट भाग्ने ?’–बास्कोटाले भन्नुभयो–‘ब्रम्हनालमा सुताएको मरेको लासलाई अस्पताल लगेर ब्युझाउँनु भने झै विघटित संसद पुनस्र्थापना हुनु पर्‍यो भनेर कराउनुको अर्थ छैन ।’ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई थप प्रधानमन्त्री के को लागि चाहिएको हो ? भित्तामा फोटो झुण्ड्याउन कि ? अझै सिमा मिचाउन ?’– बास्कोटाले भन्नुभयो– ‘भित्तामा राष्ट्रपति भए झै तत्काल प्रधानमन्त्री हुने सपना भित्तामै सिमित हुनेछ ।’
नेता बास्कोटाले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न युवाहरुलाई आब्हान गर्नु भयो । ‘अदालतबाट संविधान शंशोधन गर्न पाईदैन’–नेता बास्कोटाले भन्नुभयो–‘संवैधानिक विषयमा फैसला गर्न संवैधानिक इजलाशबाटै हो त्यो सर्वाेच्चले निर्णय गरिसक्यो । संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।’ देशको सिमा रक्षा गर्न, राष्ट्रियता जोगाउन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालेको कदमको पक्षमा उभिन बास्कोटाले आग्रह गर्नु भयो । कार्यक्रममा नेकपा काभ्रे अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले बैचारिक संगठन निर्माणमा जोड दिदै चेतना र योजना भएका युवाहरु तयार गरी मुलुक निर्माणमा लाग्न युवाहरुलाई आब्हान गर्नु भयो । जिल्लाका १ सय ३५ वटा वडा, १३ वटा पालिका, चारवटा प्रदेश कमिटी र दुईवटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय कमिटी निर्माण गरी निर्वाचनमा होमिन अध्यक्ष ब्याञ्जुले युवाहरुलाई अनुरोध गर्नु भयो ।
नेकपा ओली समुह तथा प्रचण्ड माधव नेपाल समुहले विभिन्न स्थानमा भेला आयोजना गरेका छन् । दुबै समुहको काठमाडौमा शनिबार एकै पटक भेला आयोजना गरिएको थियो भने ओली समुहले पनौतीमा युवाहरुको भेला आयोजना गरेको थियो । प्रचण्ड माधव समुहले नमोबुद्धको भकुण्डेमा भेला आयोजना गरेको थियो ।
काँग्रेसले गर्‍यो १३ तहमा विरोध सभा
नेपाली काँग्रेसले जिल्लाका १३ वटै तहमा विरोध सभा आयोजना गरेको छ । पनौतीमा गरेको सभालाई नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले सम्बोधन गर्दै सर्वाेच्च अदालतको फैसला स्विकार गर्ने बताए । सर्वाेच्च अदालतको जस्तोसुकै फैसला आए पनि स्विकार्ने बताउँदै लेखकले नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्रको पक्षपाती भएकाले निर्वाचनमा भाग्न नसक्नेब ताए । निर्वाचन नगरी धोका भयो भने त्यतिबेला काँग्रेसले आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याउने चेतावनी दिदै नेता लेखकले दुबै अवस्थाका लागि तयारीमा रहन अनुरोध गर्नु भयो । बनेपामा आयोजित सभामा केन्द्रिय सदस्य शिव हुमागाई लगायतका नेताहरुले संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले जनता सचेत हुँदै असंवैधानिक कामको खवरदारी गर्नु पर्ने बताएका थिए ।